कथा : यो कथाको अन्त्य छैन ! - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कथा : बिहान हुनु अघि
कविता : तिम्रो सम्झनामा →
“तँपाइले नभने पनि मलाइ थाहा छ ,मैले त अस्ति बेचौँ भनेको ! आखिर के कमी छ र अब ? ” उसले मैले नबोलिकननै मेरो ढाडको रोग पत्ता लगाई ।
हो हुन पनि , के कमी छ र अब छोरा पढुन्जेल गाई पाल्दा साइड जब भएको थियो टिचिंग बाहेकको जसले हाम्रो घरलाई सघाउने भएको थीयो । अहिले त किन नै पो चाहियो र गाई ?
उ चिया लिएर बाहिरको बरण्डा मा निस्की , म उसको पछि पछि लागेँ । आज घाम चर्केला जस्तो छ । धान सुकाइदिनु पर्ने छ मिल को चट्टालमा लगेर ! बाटो पानी नपरेर धुलै धुलो भएको छ । अम्बक का बोट मा गिठ्ठा अम्बक झुण्डिन थालेछन् । कान्छो छोरालाई सम्झेँ अम्बक खुबै मन पराउँथ्यो ।
“ आज सपना नराम्रो देखेँ , कान्छा लाई फोन गरेको लागेन !”
सुधाले गुनासो पोखी ।त्यहि भएर रहेछ उसको उज्यालो अनुहार मलिन् । बिहा गरेको बेला थोरै काली छे भनेर धेरैले भने तर आज छब्बिस बर्ष पछि पनि मलाई उ उस्तै उज्याली उस्तै फरासिली लाग्छे ।
“अब सँधै त कहाँ बाट गर्न सक्छ त विदेशबाट तिमी पनि !”
फेरि उसको गुनासो ,हामी एक अर्काको गुनासो पेटीका भएका छौँ , म उसको गुनासो बोकिदिन्छु उ मेरो गुनासो बोकिदिन्छे ।फरक यति छ उ गुनासो लाई दोहोर्याइ तेहेर्याई कन भनिरहन्छे , म भन्दिन तै पनि उ बोक्छे । उसले मेरो मौनता बुझेकी छे ।
“हैन नी , आज त छुट्टिको दिन सँधै गर्थ्यो ,फेरि तिन दिन पनि त भयो !”
“आउला नि त !” म माया देखाउन चाहन्न ,फेरि सुधा जिस्क्याइहाल्छे तँपाइलाई पनि त खरो भइहाल्ने रैछ नी खाली मलाई मात्र भन्नुहुन्छ भनेर !
“एक चोटी तँपाइले ट्राई गर्नु न लागिहाल्छ कि !”
मैले कल गर्ने लाइसेन्स पाएँ अब म जति पनि ट्राइ गर्न सक्छु लगाएरै छोड्नेछु ।
फोन लागिरहेको रहेनछ ,यो नेटवर्क मलाई रिस पनि उठ्छ ,बिचरा कान्छो पनि त ट्राइ गरिरहेको होला !उसलाई पनि त थाहा छ उसकी आमाको वानी !
“ कि जेठो लाई फोन गरेर चित्त बुझाउँछ्यौ त !” मैले उसलाई जिस्क्याएँ । हिजो जेठोले मसँग गफ नगरिकन फोन राखेको थियो !
“छ्या हिजो राति गरेको हैन !”
“तिमीले यसपाली आउँदा सुन्तला लिएर आइज भन्यौ त ! भनेनौ भने त ल्याउँदैन त्यसले ।”
“आँफै फोन गरेर भने भइहाल्यो नि खाली मलाई अराउनुहुन्छ !” उसले साग पखालेको पानी मा आफ्नो हात भिजाउँदै भनी ! उसको हातको घडी पुरानो भएको छ ,अर्को ताली बजार गएको बेला उसले थाहा नपाई घडी ल्याइदिनुपर्ला !
“खाली आमा खोज्छन् केटाहरु !
फोन को घण्टी बज्यो ,सुधा जुरुक्क उठी ।थोरै उज्यालो फर्कियो , म पछि पछि लागेँ उसको । कान्छोको फोन हैन रहेछ म बाहिर निस्केर आफ्नो मेमोरिकार्डका गितहरु सुन्न थालेँ ! बरण्डाको खाटमा गर्मिमा घाम आएर बस्न गाह्रो हुन्छ । भित्र गएर कुर्सि झिकेँ । अम्बकको छायाँ मा राखेँ !
“गोपाल बाजेको पो रैछ ,आफू त कान्छोको होला भनेर उठेको !” उसको अनुहारको उज्यालो हराएको थियो । म पनि त विवश नै थिएँ नी फोन लागिराखेकै थिएन ।
“टाढा पठाएपछि त्यस्तै हो !” उसको अनुहारमा रिस नदेखेको धेरै भएको छ तर उ रिसाउँदा पनि राम्री लाग्छे ,मेरै आफ्नि लाग्छे ।
“मैले पठाएको हो ?” उ थोरै झर्किई !
“आजको चिया साह्रै मिठो थियो !” मैले कुरा मोडे
“पर्दैन खान फेरि ,त्यसै त ग्याष्ट्रिक ले खाना नरुच्ने भइसकेको छ !” उ झर्किए जस्तो गरी मलाई थाहा छ उ किचन भित्र छिरेर बनाएर लिएर आउनेछे अब चिया !
“तिमीले बनाएको खाना मलाई नरुचेको छ र कहिल्यै !” उसलाई किचन भित्र छिराउन यी शब्द पर्याप्त थिए ! बाटोमा मेरै बिध्यार्थी गन्जी र हाफ पाइन्ट मा साइकलको ट्युब गुडाउँदै थियो ।
“सुवाष अम्बक खान्छस् ?” मैले बोलाएँ ।उ लुरुलुरु आयो मलाई नमस्ते गर्यो मैले गिठ्ठो अम्बक टिपेर दिएँ । मेरो कान्छोलाई पनि पाकेको अम्बक मन पर्दैन !
सुधा चिया लिएर आई ।
“फोन लागेन है !”
मैले टाउको हल्लाएँ !
“ट्राइ नै गर्नु भएको छैन की के हो ?”
“तिमीलाई माया लाग्छ नि छोरा छोरीको !” म पनि झर्किए जस्तो गरेँ !
“मैले त्यहि नै त है भनेको ,अहिले को चिया चाहिँ कस्तो छ नी !” उसलाई थाहा रहेछ मैले अघि चियाको नाममा कुरा मोडेको थिएँ भनेर !
“आज खाना चाँडै खानुपर्ने ,छुट्टिको दिन !”
“परेको छैन है तास खेल्न जान !” उ कसरी मैले पुर्ण नगरेका वाक्यहरु बुझ्छे ,मेरा शब्दभित्रका अर्थहरु बुझ्छे !
“दाजुले अघि फोन गरीसक्नुभयो !” मैले दोष दाइलाई देखाइदिएँ , दाजुले पनि मैले बोलाएको भन्नु भएको होला घरमा पक्कै पनि !
“कस्तो माया नलागेको छोरोको ,फोन गरेको छैन तँपाइलाई पनि !” उसले मलाई सँधै इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न खोज्छे । छुट्टिको दिन घरमा एक्लै बस्न उसलाई पनि मन छैन तर उ भन्न पनि त सक्दिन !
फेरी फोनको घण्टि बज्यो
“कान्छा के छ तेरो खबर।।।हेर न हिजो सपना कस्तो कस्तो देखेँ ।।।।।।।।।।।।“ उसको अनुहारको मलाई सबैभन्दा मन पर्ने उज्यालो फर्कियो । म फोनको छेउ तिर लम्किए उसले धेरै बेर गफ
गरेपछि मलाई पनि एकछिन गफ गर्न दिनेछे भनेर ! आज ढुंगानाको तास खेल्न पनि जान पाइने भो !!!!!!!!!!!!
यो कथा यति नै ,शायद यस्ता कथाहरुको अन्त्य हुन्न !